မဖြူ ကြိုက် တဲ့ ငှက်ပြော သီး – Hlataw.com
မဖြူ ကြိုက် တဲ့ ငှက်ပြော သီး
ဝုန်းခနဲ ရွာချလိုက် သော မိုးကြောင့်… မြင့်ခိုင် ပြန်မည့် ဆဲဆဲ ဝတ်ထားသော ယူနီဖောင်းပင်ပြန် ချွတ်ရတော့မလို ပြန်တော့မယ် ဆိုမှ မိုးကလဲရွာ လိုက်တာနော် တပ်ခွဲမှုး ဟုတ်ပါ့ စာရေးမရယ် ကျွန်တော်ပြောင်းလာထဲက အချိန်မှန်ကို ရွာတော့ တာပဲ တပ်ခွဲမှုးဒီမှာ လစာ စာရင်း သြော် အင်း အတော်ပဲ ဒါလေးစစ်ပီး မိုးတိတ်တော့ပြန်လို့ ရတာပဲ ကော်ဖီသောက်ဦးမလား တပ်ခွဲမှုး မဖြူ ပြောလဲပြော ထမိန်ကို တပ်ခွဲမှုးရှေ့ ဖြန့်ဝတ်ပြလိုက်သည်ုစည်ပင် ထမိန်ဗျောင် အောက်မှ မဖြူ အဖုတ်ကြီးက ဖောင်းပြီးကားထွက်နေသည်
ဟုတ်..အင်း ဖျော်လိုက်လေ ကောင်းတယ် မိုးအေးတော့ ကောင်းတာပေါ့ မဖြူထွက်သွားပြီး မြင့်ခိုင် စည်းစားလိုက်သည် အင်းဒီ စာရေးမကြီးက ငါကြားထားတာနဲ့ တူနေဘီတူတယ် မိမိ မှာ အသက် ၃၈နှစ်ပင်ရှိသေးသော်လဲဒီစည်ပင် သန့်ရှင်းရေးအလုပ် ကိုလုပ်လာတာ ၁၀နှစ်ကျော်နေပြီ မိန်းမနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် အမှိုက်လှဲသော သန့်ရှင်းရေးမ စားရေးမ ဗိုလ်မှုးကတော် ဌာနမှုးကတော် ကအစ မစားဖူးတာမရှိ ကြီးမားရှည်လျှားသော လီးကြီးက မိန်းမတိုင်း တစ်ခါလိုးခံဖူးသည်နှင့် တမ်းတမ်းစွဲကာ နောက်တစ်ခါ လိုးခံရန် အသင့်ပင် တိုင်တာတောတာဖြစ်ဖို့ဆို ဝေလာဝေး ဒါက မိမိ၏ မွေးရာပါ လက်ဆောင် ကြီးကြောင့်ပင်။
မဖြူ တစ်ယောက် စားသောက်ခန်းထဲဝင် မပူမအေးရေနွေး တစ်ဖလားကိုယူ အရင် တပ်ခွဲမှုးများအားလုပ်နေကြအတိုင်း လုပ်ရန် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီကို ပေါင်လယ်လောက်ထိ ချွတ်ချ သေးပေါက်သလို ငုတ်တုပ်လေးထိုင် အောက်တည့်တည့်တွင် ကော်ဖီဖျော်ရန်ယူထားသောခွက်အလွတ်ကိုထား မပူမအေး ရေနွေး နွေးနွေးကို မိမိ အဖုတ်ပေါ်ဖြေးဖြေးခြင်းလောင်းချ လက်တစ်ဖက်က အဖုတ်နှစ်ခမ်းသားနှစ်ချပ်ဖြဲ ပွတ်သပ်ကာ ခွက်တွင်းသို့ ရေကို တဆက်ဆက် ကျစေတော့သည် တစ်ဝက်ခန့်ရောက်တော့မှ အတွင်းခံကို ပြန်ဝတ်.ကော်ဖီမှုန့်နှင့် ရေနွေးထပ်ထည့်ကာ ဇွန်းမသုံးပဲ စောက်ဖုတ်ထဲ လက်ညိုးထိုးထည့်ကာ ထိုလက်နှင့်ပဲ မွှေလိုက်သည်
ဒီလိုမလုပ်လို့ မရ လစာစာရင်းငွေထဲက တစ်ပတ် ၂သိန်း၃သိန်းဆိုသောငွေ က မိမိအတွက်မနည်း ကို့ပါကို ဖျောင်ပစ်ရသည် တပ်ခွဲမှုးက ပေးမကိုင်လျှင် ထိုငွေလဲ မရ ခွဲမှုးတွေ ပေးသော ၁ပတ်စာ မုန့်ဖိုး၁သိန်းလဲ မရမှာဆိုးရသည်လေ လက်ရှိ ခရိုင်ကိုတင်ထားသည့် လူဦးရေက ၂၃၀ မြို့နယ်တွင် နေ့ ည ပေါင်းရှိသည်က ၁၄၀ သာ လူတစ်ယောက်ကို တစ်ပတ်၉ထောင် နှင့်သာတွက်ကြည့် တစ်ပတ်တစ်ပတ် တပ်ခွဲမှုးတစ်ယောက်ဝင်ငွေက မနဲ ထိုထဲ မှ ရုံးစာရေးမအဖွဲ့ နှင့် ခွဲကာ တပ်ခွဲမှုးက ၃ပုံ ၂ပုံ ယူသည်
ကျန်တာက မိမိတို့ရုံးအဖွဲ့ ခွဲမှုး ကော်ဖီရပြီ ရေနွေးကတော့ နဲနဲအေးနေတယ် ဟာရပါတယ် မဖြူ မဖြူ ခဏ ဒီမှာလူစာရင်းက ကွက်တိကြီးဖြစ်နေတယ် နားတဲ့လူ မရှိဘူးလား အင်းမရှိဘူးခွဲမှုးရဲ့ အင်းတိုင်ပတ်တော့မယ် ဒါနဲ့ ခွဲမှုးဆေးလိပ်သောက်မလား ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ မဖြူကောင်းတာပေါ့ အာ့ဆိုခဏနော် ကျမသွားဝယ်လိုက်ဦးမယ် လှည့်ထွက်သွားသော စာရေးမ၏ နောက်ပိုင်းက တစ်လုံးခြင်းနိမ့်တုန် မြင့်တုန် ခုန်ကာ မိမိကိုမြူ စွယ်သွားသည်
အင်း အရင်ဒီတပ်ခွဲမှာနေတဲ့ ခွဲမှုးတွေ ဒါကြီး မဖြိုနိုင်ကြဘူးပဲ တွေ့ကြပြီပေါ့ ရုံးစာရေး.မအငယ်လေးတွေလဲ အကုန်ပြန်ကုန်ကြပြီ အလုပ်သမားနေ့ဆိုင်းကလဲ ပြန်ကုန်ကြပြီ ညဆိုင်းကလဲ တန်းစီတာဝန်ချပြီး ထွက်သွားကုန်ပြီမို့ ဒီစာရေးမ ဖြူဖြူတုတ်တုတ် မဖြူ ကြီးကို ရသောအချိန်ကို လက်လွှတ်မခံပဲ ကြံရမည် တစ်ခုလပ် မကြီးမို့ လိုးကောင်းမည်က မလွဲ ရပြီ ခွဲမှုး ဆေးလိပ်တွေ ခုံပေါ်တင်အပေးတမင် ပြုတ်ကျအောင်လုပ်ပြီးစောစောက အပြင်တွင် ချွတ်ထားသော ကြယ်သီးတစ်လုံးကြောင့် မိမိနို့ ဖွေးဖွေးတွေ ခွဲမှုးမြင်သာစေရန် ကုန်းပြီး ကောက် လိုက်သည်
မိမိ နို့နှစ်လုံးကို စားမတက် ဝါးမတက် ကြည့်နေသော တပ်ခွဲမှုး ကော်ဖီခွက်ကို မော့အသောက် အဲ ဘာလဲဟ မိမိနုတ်ခမ်းမှာကပ်နေသော အရာကို ယူကြည့်လိုက်ရာ ကောက်ကွေး နေသော အမွှေးကြမ်းကြမ်းတစ်ချောင်း မဖြူ ဒါက ဘယ်လို အို ဘယ်လိုများပါသွားပါလိမ့် ကတော့နော် ကတော့ ရပါတယ်.မလိုပါဘူး ဘယ်လိုပါပါမပါ ဘယ်လိုပဲ လုပ်လုပ် ကျွန်တော်က မရွံတက်ဘူး. ရှင် …. မရှင်နဲ့တော့ ဒါ မဖြူ ရဲ့ အဖုတ်မွှေး အဲ့တော့ မဖြူ အဖုတ်ကို ကျွန်တော် ယက်ချင်တယ် ရှင်… လာပါ ရှက်သလိုလုပ်မနေနဲ့တော့
မဖြူ စားပွဲပေါ် တက်လိုက် ဟုတ် ..ဟုတ်… စည်ပင် ထမိန်ကို မတင် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဆွဲ ချွတ်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်ပြီး မဖြူ၏ စဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို လျှာဖျားနှင့် ယက်ပေးလိုက်သည် အတွေ့ကျုံ ရှိပေမယ့် ယခုလိုမိမိစဖုတ်အား ခုပြောခုယက် နေသော တပ်ခွဲမှုး မြင့်ခိုင်ကြောင့် မဖြူ တစ်ယောက် အရသာသစ်တစ်မျိုးရကာ ယက်နေသောတပ်ခွဲမှုးမှာလဲ သဘာမသေးကြောင်းရိပ်စားမိလာသည် လျှာဖျားနှင့်တစ်မျိုး လျှာအပြားလိုက်ကြီးနှင့်တစ်မျိုး လျှာကိုခွန်ကာတစ်ဖုံ ဇောင်းလေးနှင့်ကတနည်း… လုပ်ချင်သလိုလုပ် နေရာ မိမိလဲ ကော့ပျံလန်နေ နေပြီ
အိုး…..ကောင်းလိုက်တာ ခွဲမှုးရယ် အရမ်းကောင်းတာပဲ ……. စောက်စေ့ ကို လျှာဖျားနှင့်ချွန်ထိုးကာ တစ်ဇက်ဇက် ကစားပေးလိုက်ပြီး စအိုဝထဲ လက်ညိုးထိုးထည့်လိုက်သည် အင့်….. အဲ့…တာမလုပ်နဲ့ လေခွဲမှုး မရဘူး ဒီနေ့ အဲ့ဖင်ကြီးပါ လိုးခွဲပေးမယ် မလုပ်အင့်….အား……ရှီး….ရှီး….. စောက်စေ့ကို ဇက်ကနဲ့ စုပ်ပြီး သဖုံးသားနှင့် အသာဖိလျှာနှင့် ကစားပေးတော့ အား….ခွဲမှုး…အား…အား….. သေပါပြီ ကောင်းလိုက်တာရှင် စုပ်ပေး စုပ်ပေး မမဖြူ အဖုတ်ကြီးကျွတ်ချင် ကျွတ်ထွက်ပါစေ စုပ်ပါတော့ ….. ပြောလဲ ပြော မိမိခေါင်းကြီးကို အတင်းဆွဲဆွဲဖိနေရာ စအိုထဲ ဝင်နေသောလက်မှာလဲ စအိုကိုလိုးနေသည့် နှယ်…. ..လမ်းတစ်ဝက်ရောက်မှ မိမိ အံစွဲထဲမနက်ဖြန်မနက် ရုံးချုပ်သို့သွင်းရမည့် အမှိုက်ခွန် ငွေတွေသတိရကာ နန်းဝတ်ရည် တစ်ယောက် မပြေးရုံတစ်မယ် ရုံးသို့ သုတ်ခြေတင်လာတော့သည်
ရုံးရောက်တော့ ဘယ်သူမှမရှိ တပ်ခွဲမှုးအခန်းက ပိတ်ထားသည်မို့ အင်းပြန်ကုန်ကြပြီတူတယ် မိမိအံစွဲဖွင့်ကြည့်တော့ တော်ပါသေးရဲ့ ရှိသေးလို့ ငွေတွေကိုရေနေခိုက် အင့်…အား……အား… လိုးလိုး….လိုးလိုက်ပါတော့ ဒီမှာ မနေနိုင်တော့ဘူး….. မလိုးသေးပါဘူး မဖြူ ရဲ့ အဖုတ်ကို နိုင်ငံခြားကားထဲကလို လုပ်ပေးဦးမှာ ခဏစောင့် အဝတ်တွေ အကုန် ချွတ်ထားပြီး စားပွဲပေါ်ပက်လက်လှန်နေနော် နန်းဝတ်ရည် ပိုက်ဆံရေနေရာမှ ကမန်းကတန်း စာရင်းစာအုပ် ဗီရိုဖိုင်နား.ဝင်ပုန်းလိုက်သည်
သိပ်မကြာလိုက် တပ်ခွဲမှုး သီးမွှေးငှက်ပြောသီး ပန်းသီးစိတ် များလက်ထဲကိုင်ကာ ပြန်ထွက်လာသည် ဟင်း…မဖြူကတော့ ရုံးခန်းတခါးလဲ ပြန်မပိတ်ခဲ့ဘူး မြင့်ခိုင် တံခါးမကြီးပိတ်ရင်း ဒီမှာ မိန်းမ ဖိနပ်တစ်ရံပါလား အခန်းထဲ တစ်ယောက်ယောက် တော့ရှိနေပြီ ငါတို့ကိုချောင်းနေတာဖြစ်မယ် မသိသလိုနေပြီးအကဲခတ်နေရမယ် အပြင်ခန်း တခါးကို ဂျက်ချ မသိသလိုနှင့် မိမိအခန်းထဲဝင်ပြီး တစ်ကိုလုံး အဝတ်စားတွေ ချွတ်ချလိုက်သည် အိုး….. ဟယ်တော့…….. စာရေးမကြီး.မဖြူ စာရေးမလေး နန်းဝတ်ရည်ပါမျက်လုံးပြူး အာမေဒိတ်သံထွက်လာသည် ဝင်းဝါနေသော လီးတံကြီးက မိမိတို့ သောက်နေကြ ဖန်ပုလင်းဖင်ထက်ပင် ကြီးမည်တူသည်
လူသာပိန်တာ.လီးကြီးက နဲနဲနောနောကြီးမဟုတ် ရှည်လဲရှည်သည် အပျိုမလေး နန်းဝတ်ရည် ခမျှာ ကြီးမားရှည်လျားလှသော လီးတံကြီးက တယမ်းယမ်းနှင့် တဖြည်းဖြည်းကြီးကာ အောက်မှ ထောင်မက်လာတာ ကြည့်ရင်း လယ်ချောင်းတစ်ခုလုံးပူသလို လို ရေငတ်သလိုလိုဖြစ်ကာ စတွေးတွေကို မျိုမျို ချမိနေသည် မမ ဖြူ ပေါင်လေး ကားထား မဖြူပေါင်ကို ကားပြီး ခေါင်းလေးထောင်ကြည့်တော့ သီးမွှေးငှက်ပြောသီးကို အခွန်တစ်ဝက်ခန့် ခွာကာ မိမိ အဖုတ်နုတ်ခမ်းသားတွေကို ခပ်ဖွဖွ ထိုးကစားကာ ဆက်ကနဲ့ အဖုတ်ထဲ တစ်ဆုံး ထိုးထည့်လိုက်ရာ.. အား….ရှိး….. ဘယ်လို လုပ်လိုက်တာလဲ ခွဲမှုးရယ် တစ်မျိုးကြီးပဲ လိုးချင်လိုးပါတော့ စိတ်ကြိုက်သာလိုးပါ အဲ့လိုမမြူနဲ့တော့ မမဖြူ အဖုတ်ကြီး ခံခြင်လွန်းလို့ ပေါက်ကွဲတော့မလားပဲ လိုးပါတော့ လို့ မမ ဖြူ စားပွဲပေါ်လေးဖက်ထောက်လိုက် ဖင်လေးကော့ပေးထား ငှက်ပြောသီး ပြန်ထုတ်မယ် နန်းဝတ်ရည်တစ်ယောက် မြင်နေရသောမြင်ကွင်းတွေကြောင့် မနေနိုင် မထိုင်နိုင် စဖုတ်တစ်ခုလုံး ရွစိစိ ဖြစ်လာသည်
လက်နှင့် ကို့ဟာကိုသာ ပွတ်သပ်ပေးရသည် တပ်ခွဲမှုးမှာ လေးဖက်ထောက်ကော့ပေးထားသော မမဖြူ ၏ ငှက်ပြောသီး အလုံးလိုက်ဝင်နေသော အဖုတ်စူစူကြီးကို လျှာနှင့် ပင့်ယက်ကာ စုပ်နေသည် ငှက်ပျောသီးမှာ လက်တစစ်ခန့် ပြန်ထွက်လာသည် ညာဖက်လက်ခလယ်ကို မဖြူစအိုဝထဲ ဖွတ်ကနဲတဆုံးထိုးချလိုက်သည် ရုတ်တရက်ကြီးမို့ မဖြူ စအိုကို ကျုံလိုက်မိရာ ငှက်ပြောသီးက တစ်ဝက်ခန့် အပြင်သို့ ထွက်လာရာ ခွဲမှုး ငှက်ပြောသီးကို ကိုက်ကာ စဖုက်ကို ငှက်ပြောသီးနှင့် လိုး စအိုကို လက်ညိုးနှင့် တစ်ပြိုင်ထဲ လိုးပေးနေရာ .၅မိနစ်ခန့်ပင်မကြာလိုက် အား……အီး…… အဟင်း….ဟင်း….. မရတော့ ဘူး မရတော့ဘူးထွက် ပြီ ထွက်ပြီ ထွက်ကုန်ပြီ အား……..ဖင်ကို ကော့ကော့ကာတွန်းလိုက်သဖြင့် ငှက်ပြောသီးမှာ အဖုတ်ထဲမှ ကျွတ်ထွက်တော့မယ် မိမိမှာထွက်လာသောငှက်ပြောသီးကို ဖြေးဖြေးခြင်း ကိုက်ကာ စဖုတ်ထဲကျန်နေသောငှက်ပြောသီး တစ်ကိုက်စာခန့် ကို ဆွဲစုပ်ချလိုက်တော့သည်
အိုး မမဖြူ ဟာတွေ ပါ ပါကုန်ပြီ ရွံ့စရာကြီး ချောင်းကြည့်နေသော နန်းဝတ်ရည် ခမျှာမှာလဲ သေးပေါက်ချင်သလို ဖြစ်ကာ မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ လွတ်ချမိ လိုက်တော့သည် ပြန်မည် အလုပ် မြင်ကွင်းက မကြည့်မနေနိုင်အောင်မို့ ခြေလှမ်းတွေ က အရှေ့က်ု ပိုတိုးမိသွားသည် မဖြူ ခွဲမှုးလီးကြီးကို သူ့ပါးစပ်ကြီးနှင့် မဆံ့မပြဲ ကြီး ရေခဲချောင်းစုပ်သလို တပြွတ်ပြွတ်နှင့် စုပ်ပေးနေသည် ဥ နှစ်လုံးကို လျှာနှင့် ယက်လိုက် လီးကြီးကိုစုပ်လိုက်နှင့် တပ်ခွဲမှုး မှာလူသာစပွဲပေါ်လှဲနေသောလဲ လီးကြီးက မိုးပေါ် ထောင်နေသည်လက်တစ်ဖက်က မမုဖြူ နို့နဲ့ အဖုတ်ထဲရောက်နေသည် လိုးတော့မယ် လိုးခံဖူးပေမယ့် လိုးတော့မယ် ဆိုသောစကားသံကြောင့် ရင်ထဲ ဘယ်လိုကြီးမသိ အင်းလိုးလေ ဖြေးဖြေးတော့ထည့်နော် ခွဲမှုးဟာက နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူး အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ ခံချင်တာကြာပြီ တစ်ခါမှတော့ မခံဖူးဘူး
အင်း…ပါ ဗြစ်.ဗြစ် ….ဗြစ် ဗြွတ် အင့်…. အင့် အာဟာ…းး အား…….. ဖြေးဖြေး ပေါင်နှစ်ချောင်းထောင်ကာ မိမိ မျက်စေ့ရှေ့ စဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးထဲ ကြီးမားလှသောလီးကြီး ဝင်သွားပုံက နေရာလပ်မကျန် တအိအိနှင့် တင်းကြပ်စွာဝင်သွားသည် ယောင်ယမ်းပြီး မိမိအဖုတ်ထဲလက်ခလယ်ပင် ထိုးထည့် မိသည် အမလေးလေး ငါ့ အဖုတ်ကြီးသာဆို ကွဲသွားမယ် တူတယ် အား…..ဆက်မထည့်နဲ့တော့ သားအိမ် ထိနေပြီ လီးက တစ်လက်မကျော်လောက်ကျန်ဦးမည် ဖြေးဖြေးခြင်း ပုံမှန် လိုးနေရာမှ မဖြူ နို့နှစ်လုံးကို ကိုင်ကာ နဲနဲ မြန်ကြည့်သည် အောက်မှ မဖြူမှာ ခံနိုင်ရည် ရှိလာဟန်တူသည်
တဟင်း.ဟင်း….ညည်းတွား ကာ ဖင်ကိုစကောဝိုင်းလို့ မွှေပေးနေသည် ဗြွတ် ဗြွတ် ဘွတ် ဖွတ်ဖွတ် အင့် အား…… အားရှီး……ကောင်းလိုက်တာ… အိုးအား….. အမေရေ … ကောင်းလိုက်တာတော့ အိုး………အား…….လိုးလိုးစိတ်ကြိုက်လိုးတော့ အားအနည်းငယ်ထည့်ကာ လီးကို တစ်ဆုံး ထိုးလိုက် သည့် အူး…..ရှီး….ရတယ် လိုး…လိုး….. မညှာနဲ့ မညှာနဲ့. စိတ်ရှိလက်ရှိသာကြမ်းပစ်သော မဖြူ အဖုတ်ကွဲချင် ကွဲ ပါစေတော့…. ပြောလဲပြော ကော့ကော့လဲ ပေးနေရာ အပျိုမလေး နန်းဝတ်ရည် ခမျှာ စဖုတ်ထဲလက်ကို ခက်မြန်မြန် ကစားနေရာမှ ကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်ချကာ ထမိန်လှန်ပြီး ဖီးတွေ တက်နေတော့သည်
ယခုနေမိမိကို လာလိုးလျှင် ခံမိမည် မလွဲ တစ်ဖက်ခန်းမှာလဲ ဗြွတ်…အား…… ဗြွတ်….ဖြောင်း…..ဖြောင်း….ဖောင်း အင့်….အား……..လိုးလိုး.အားရပါးရသာလိုး မဖြူ ခဏစောင်းလိုက် မဖြူ အသာလေးစောင်းလှည့်လိုက်သည် လီးကိုမကျွတ်အောင် ခွဲမှုးမှာ ထိန်း၍ ခုန်ဇောင်းနား ဆွဲကာ ပုဇွန်တုန်ကွေးပုံနှင့် မဖြူကို မက်တပ် တဖြောင်းဖြောင်းမြည်အောင် လိုးတော့သည် အားရှီး အရသာ ရှိလိုက်တာ ဒီလိုမျိုးလိုးခံခြင်နေတာ ကြာပြီ ဖင်အိုးကြီး ကောင်းလှသောမဖြူဖင်ကြီးမှာ ဆောင့်ချလိုက်တိုင်း တုန်ခနဲ တုန်ခနဲမို့ မိမိလီးကြီးအစွမ်းကုန်မာတောင်နေသည် အကြံစည်နှင့်မို့ မြင့်ခိုင် လီးကို ဇတ်ကနဲ ချွတ်ပြီး စအို ဝတေ့ကာ ဗြစ်ခနဲမြည်အောင် ဖင်ပေါက်ထဲ လီးကြီးကို သူနာ ကိုနာ အစိမ်းလိုးခွဲ တစ်ဆုံးသွင်းချလိုက်သည်
အား……အမလေး….သေပါပြီ မညှာမတာကြီး အားနှင့် တစ်ဆုံး.မပြောမဆိုလိုးတာ ခံလိုက်ရသဖြင့် မဖြူတစ်ယောက် အမလေးသာ အော်နိုင်လိုက်သည် ခွဲမှုးလက်တစ်ဖက်က မိမိပါးစပ်ကို ပိတ်ကာ ဖင်ကို သူ့လီးကြီး တစ်ဆုံး မညှာမတာ ထိုးသွင်းနေတော့သည် နန်းဝတ်ရည် ခမျှာကြည့်ရင်းမိမိဖင်ပါကွဲသွားသယောင် စအိုပင် ကျုံထားမိသည်
ဖြူဖွေးနေသော ဖင်နှင့် လီးမှာ သွေးတွေ ရဲကာနေသော်လဲ အလိုးမပျက် သံချောင်းကြီးလို မာကျောနေသော လီးကြီးက ဖင်ထဲမှနေ ဗိုက်ထဲ ရောက်လာသည်လားမသိ ခွဲမှုးလက် က ပါးစပ်မှနေ မိမိစောက်စေ့ ကို ပွတ်လိုက် ခပ်ဖွဖွ စိတ်လိုက် လုပ်နေသလို လီးကြီးကလဲ ဖင်သားနရံတွေကို.ပွတ်သပ်နေရာ ဖင်ခံရသည်မှာ အရသာရှိလာသည် လိုးနေသော အရှိန်က မရော့ ပိုသွက်လာသည် ခွဲမှုး ဖင်ထဲ မပြီးနဲ့နော် အဖုတ်ထဲပီးပေး အားရှိလို့ အဲ့တာဆို ပင်လက်လှန်ပေး ပြီးတော့မယ်
မဖြူ ပက်လက်လှန် ပေါက်ကို ဖြဲပေးထားရာ ခွဲ မှုး အားရှိ ပါးရှိ စောင့်စောင့် လိုးချနေသည် ၅မိနစ်ခန့် အကြာ လိုးလိုး…အားနဲ့စောင့်လိုး….ပြီးတော့မယ် ပြီးတော့ မယ်….. အား….. အား……….အမေရေ ပြီးတော့မယ် အား….အား…… အာအား…..အမေရေ….. ပြီး……ပြီးပြီ အ အာ….အား နှစ်ယောက်သား ထပ်လျက်သားငြိမ်ကြသွားလေတော့သည်… နန်းဝတ်ရည် ခမျှာလဲ ဆိုချွဲနေသောအတွင်းခံ ဘောင်းဘီကို အမြန်ချွတ်ချကာ ကားမှတ်တိုင်သို့. သုတ်ချေတင်လေတော့သည်…….
ကိုကို လူ ဆိုး
မမုန်း ရက်ပါ ဘူး မောင်